दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु | Suvadin !
देशका विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार काठमाडौं, नुवाकोट र पाल्पामा भएका सडक दुर्घटनाको विवरण प्राप्त भएको छ।
Feb 27, 2017 17:53
काठमाडौं, १६ फागुन - देशका विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार काठमाडौं, नुवाकोट र पाल्पामा भएका सडक दुर्घटनाको विवरण प्राप्त भएको छ।
काठमाडाैं : तार्केश्वर नगरपालिका–१० बालाजुमा बा.३ख. ६५१ नम्बरको बसले बा.७२प ६६६१ नम्बरको मोटरसाइकललाई सोमबार ठक्कर दिँदा ३५ वर्षीया गंगामाया फुयाँलको मृत्यु भएको छ। तार्केश्वर नगरपालिका–१२ की उनको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुर्घटनामा उनका श्रीमान ३८ वर्षीय राजकुमार फुयाँल घाइते छन्। उनको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
यसैगरी काठमाडौं, थानकोट सरस्वतीस्थानस्थित सडकमा हाल नम्बर नखुुलेको गाडीले ठक्कर दिँदा चन्द्रागिरि नगरपालिका–५ थानकोट बस्ने ४५ वर्षीय कान्छा रानामगरको मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका मगरको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
नुवाकोट : नर्जामण्डब–२ अमारेमा ढुङ्गा लोड गरेको बा.३ख. ९१३६ नम्बरको आइचर गाडी सोमबार दुर्घटना हुँदा गाडीमा सवार चार जनामध्ये नर्जामण्डव–४ बस्ने १३ वर्षीय केदार तामाङको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको छ। सोही ठाउँ बस्ने २२ वर्षीय सोबित तामाङ र नर्जामण्डप–९ बस्ने १६ वर्षीय लक्ष्मण तामाङ गम्भीर घाइते भएकोले उपचारको लागि ग्राण्डी अस्पताल काठमाडौं पठाइएको छ।
गाडीचालक लच्याङ–१ बस्ने २७ वर्षीय राजेन्द्र लङगुरको हातमा सामान्य चोट लागेर घाइते भएका छन्।
पाल्पा : तानसेन नगरपालिका–११ धोबिधारास्थित सडकमा ना.२ख. ३८०८ नम्बरको ट्याङ्करले आइतबार ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका खस्यौली–१ बस्ने ३० बर्षीय राजु रुचालको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। ट्याङकर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।